आस्तिक र नास्तिक हुनुको फरक – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
आस्तिक र नास्तिक हुनुको फरक
२०७० चैत्र १६, आईतवार ०३:१३ गते
— आचार्य लक्ष्मण भण्डारी
‘अस्ति इति मतिरस्यास्तीति आस्तिक’, अर्थात् छ भन्ने बुद्धि जसको छ, त्यो आस्तिक हो । त्यस्तै, ‘नास्ति इति मतिरस्यास्तीति नास्तिक’, अर्थात् छैन भन्ने विचार वा बुद्धि जोसँग छ, त्यो नास्तिक हो । सामान्यतया हामीले आस्तिक भनेर ईश्वरको अस्तित्व स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई भन्ने गर्दछौँ भने नास्तिक भनेर ईश्वरको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई भन्ने गर्दछौँ । तर, ‘आस्तिक’ शब्दले केवल ईश्वरको अस्तित्व स्वीकार्ने व्यक्ति भन्ने अर्थ मात्र दिँदैन, यसले यो संसारमा देखिने र नदेखिने सबै विषय र वस्तुको अस्तित्व स्वीकार्ने व्यक्ति भन्ने बुझाउँछ । त्यस्तै, ‘नास्तिक’ शब्दले केवल ईश्वरको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने व्यक्ति भन्ने मात्र बुझाउँदैन, बरू संसारका देखिएका र नदेखिएका कुनै पनि वस्तुको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने व्यक्ति भनेर बुझाउँदछ ।
आस्तिकता त्यस्तो भाव हो, जुन भावले सबैलाई उच्च मूल्य प्रदान गर्दछ, सबैको अस्तित्वलाई हार्दिकतासाथ स्वीकार गर्दछ र सबैप्रति श्रद्धावान् बन्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ । तर, नास्तिकतामा त्यो हार्दिकता हुँदैन । नास्तिकता सदैव नकारात्मक हुन्छ । यसले केवल छैन मात्र भन्दछ । यो पनि छैन, त्यो पनि छैन भन्नु नै वास्तवमा नास्तिकता हो । जब कि यो पनि छ, त्यो पनि छ भनेर भन्नु आस्तिकता हो । आस्तिकता स्वीकृतिको दर्शन हो भने नास्तिकता अस्वीकृतिको दर्शन । आस्तिकता ग्रहणको दर्शन हो भने नास्तिकता निषेधको दर्शन ।
संसार भन्नु नै आस्तिकताको अर्को उदाहरण हो । यहाँ के छैनन् र ? बोटबिरूवा, ढुङ्गामाटो, हावापानी, घामजून, पशुपक्षी, जीवजनावर, नरनारी आदि इत्यादि कति छन् कति ! देखिएका पनि छन्, नदेखिएका पनि छन् । हाम्रो विचार हामीले देख्दैनौँ तर छ । हामी नगएका ठाउँ कति छन् कति । हामी नघुमेका गाउँ कति छन् कति । ती गाउँ र ठाउँहरु हामीले देखेका पनि छैनौँ । हामीले नदेख्दैमा के ती गाउँ र ठाउँहरु हुँदैनन् र ? आस्तिकता विशुद्ध समर्पणको दर्शन हो । आस्तिकहरु धेरै किचकिच गर्न रूचाउँदैनन् । उनीहरुले थप प्रमाण खोज्दैनन् कुनै कुरा छ कि छैन भनेर थाहा पाउनका लागि । उनीहरुले यदि, सूर्य, चन्द्र, हावा, पानी छन् र यो प्रकृति छ भने यस्ता अरु पनि स्वाभाविक रुपमा छन् भन्ने बुझ्दछन् ।
हामीले जानेको कुरा के हो भने जहाँ कार्य हुन्छ, त्यसको कारण पनि अवश्य हुन्छ । जहाँ सिर्जना हुन्छ, त्यसको स्रष्टा पनि अवश्य हुन्छ । तर हामी कस्ता बुद्धू छौँ ! हामीले यदि राम्रो घर बनाएका छौँ भने त्यो घर मैले बनाएको हुँ भनेर दाबी गर्दछौँ, तर मलाई बनाउने पनि कोही छ भनेर स्वीकार गर्दैनौँ । हामीले रुख छ भनेर स्वीकार गर्दछौँ, तर रुख बनाउने पनि कोही छ भनेर स्वीकार गर्दैनौँ । पशुप्राणी छन् भनेर स्वीकार्दछौँ, तर तिनलाई पनि बनाउनेवाला कोही छ भनेर स्वीकार्दैनौँ । यही हो नास्तिकता । यसरी हेर्दा नास्तिकता भनेको त व्यक्तिभित्रको अहङ्कारसिवाय केही पनि होइन रहेछ । नास्तिकताले स्वयम्बाहेक अरु कसैको पनि अस्तित्व स्वीकार्दैन । नास्तिकहरुलाई उनीहरु नै यो जगत्का एक मात्र स्रष्टा हुन् भन्ने भान परेको हुन्छ । तर सत्य त यो होइन, किनकि उनीहरुको पनि कोही न कोही रचयिता अवश्य छ !
हामीले जान्दै आएको के हो भने ईश्वर सर्वत्र छन् । यहाँ पनि छन्, त्यहाँ पनि छन् । तलमाथि, दायाँबायाँ, यत्रतत्र सर्वत्र छन् । हामीले देखेका हरेक वस्तुमा ईश्वर छन् भनेर ईश्वरको अस्तित्व स्वीकार्नेहरुले भन्दै आएका छन् । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो वरपरको जुन प्रकृति छ, जुन विषयवस्तु छन्, ती फगत् कार्य हुन् र तिनको कारण छ । कार्यका पछाडिको त्यो कारण त सबैतिर छ । त्यही कारणलाई नै मानिसहरुले ईश्वरको नाम दिएका हुन् ।
हामी सबैले प्रयोग गर्ने शब्द हो ‘अस्तित्व’ । यो शब्द ‘अस्ति+त्व’ मिलेर बनेको छ । ‘अस्ति’ शब्दले छ अथवा हो भन्ने बुझाउँछ भने ‘त्व’ले त्यसको भाव वा पन भन्ने बुझाउँछ । यसरी हेर्दा अस्तित्व शब्दको अर्थ ‘होे र छ भन्ने भाव’ भन्ने बुझिन्छ । आजका कथित नास्तिकहरुले अरु केही स्वीकार नगरे पनि कम्तीमा नास्तिकताको अस्तित्व त स्वीकादर्छन् ! यदि नास्तिकता छ भने अरु किन छैन ? यदि हामीले कुनै न कुनै ढङ्गले कुनै न कुनै वस्तु, व्यक्ति वा वस्तु छ र हो भनेर भन्दछौँ भने नास्तिक नै हामी कसरी भयौँ ? नास्तिकता चाहिँ हुने, अरुचाहिँ नहुने भन्ने पनि हुन्छ र ? ‘छैन र हुँदैन’ भन्ने चाहिँ छ रे, तर ‘छ र हुन्छ’ भन्ने चाहिँ छैन रे ! नास्तिकहरुले यसो भनिरहँदा पनि उनीहरुको आस्तिकता प्रकट पनि सँगसँगै प्रकट भइरहेको हुन्छ ।
जसले छैन र हुँदैन भन्ने कुराको पनि अस्तित्व स्वीकार्दछन्, उनीहरु कसरी नास्तिक हुन सक्दछन् ? उनीहरु त झन् महाआस्तिक भए नि ! नभएको कुरा पनि छ भनेर भन्ने र त्यसको अस्तित्व स्वीकार गर्नेहरुभन्दा आस्तिक के अर्को कोही हुन सक्दछ ? अवश्य सक्दैन । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ त भन्दा संसारमा कोही पनि नास्तिक छैन । हामी यदि आपूmलाई नास्तिक मान्दछौँ भने पनि नबुझेर मान्दछौँ, किनकि संसारमा नहुने र नभएको केही पनि छैन । सबै कुरा छ । हुने पनि छ, नहुने पनि छ । र, संसार अनन्त रहस्यकोे भकारी हो ।
आस्तिक शब्दको ‘अस्ति’ शब्दले छ र हो भन्ने अर्थलाई बुझाउँदछ । जसले कसैको अस्तित्व अस्वीकार गर्दैन, सबै छन् भन्ने मान्दछ, त्यही व्यक्तिलाई आस्तिक शब्दले जनाउँदछ । हामी कोही पनि केही नभएको ठाउँमा बसेका छैनौँ । जहाँ हामी बसेका छौँ, त्यहाँ सबैथोक छन् । घाम, पानी, हावा, माटो, बोटबिरूवा, पशुपक्षी, मनुष्य आदिआदि । केही नभएका भए हामी कसरी भयौँ ? आपूmचाहिँ हुने अनि अरु भएको चाहिँ नदेख्ने पनि दर्शन हुन्छ र ? यो त अहम् पो भयो त ।
आज हामीले भन्ने गरेको नास्तिकताको दर्शन अहम्को दर्शन हो । अहम्को आयु लामो हुँदैन । यो बोध र जागरणले बनेको दर्शन होइन । यो त भोग र वासनाको जगमा विकसित भएको दर्शन हो । ‘ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्’ अर्थात् ‘ऋण गरेर पनि घिउ पिउनुपर्दछ’ भन्ने दर्शनलाई हामीले भोगको दर्शन नमानेर केको दर्शन मान्न सक्दछौँ र ? अर्कासँग ऋण गरेर पनि मीठोमीठो खानुपर्दछ, राम्रोराम्रो लाउनुपर्दछ, मोजमस्ती गर्नुपर्दछ भनेर भन्नेहरुका कारण नै आज मानवसमाज बिग्रिएको छ, व्यक्तिव्यक्ति विभाजित भएका छन् । मानिसहरुमा लोभानिपापानिले डेरा जमाएको छ ।
समाजमा नियम, कानुन, मर्यादा, कर्तव्य, अधिकार आदिइत्यादिको व्यवस्था आस्तिकताका कारणले भएको हो । सबै छन्, त्यसैले सबैका भावना छन्, आवश्यकता छन्, अधिकार छन् र सम्भावना छन् । त्यसैले, तिनको सुरक्षा, संरक्षण र विकासका लागि पनि नियम, मर्यादा र विधिको आवश्यकता पर्दछ भनेर आस्तिकताले भन्दछ । यसैले, आस्तिकताले सबैतिर सबैलाई देख्दछ । सबैलाई एक से एक देख्दछ, दिव्य र ईश्वरीय देख्दछ । यसैले पनि ईश्वरलाई मान्ने दर्शनलाई आस्तिकताको दर्शन भनेर भनिएको हो ।
ईश्वर सबैतिर छन् भनेर के भन्न खोजिएको हो भने हामीले सबैतिर देखेका विषय र वस्तुहरु अत्यन्त कलात्मक छन् र रहस्यमय तरिकाले बनेका वा बनाइएका छन् । तिनलाई बनाउने जुन शक्ति छ, त्यसको अंश पनि ती वस्तुहरुसँगै रहेको छ । हामीले देखेका हरेक रुप र अवस्थाहरु ईश्वरकै प्रतिबिम्ब हुन् । यो समग्र जगत् हाम्राअगाडि दृश्यमान् छ । हामीले जे देखेका छौँ, ती सबै वस्तु एउटा निश्चित विधि, समय र नियमबाट गुज्रिएर बनेका छन् । तिनलाई ती विभिन्न अवस्था र नियमबाट गुज्रन प्रेरित गर्ने जुन शक्ति छ, त्यसैलाई मानिसहरुले ईश्वरको नाम दिएका न हुन् । आखिर हामी सबैले प्रकृतिमा रहेको रहस्यलाई त अवश्य मान्छौँ नै । त्यही प्राकृतिक रहस्यलाई यदि हामीले स्वीकार गर्दछौँ भने ईश्वरलाई किन अस्वीकार गर्ने ? मानिसहरुले त्यही अज्ञात र विशिष्ट ब्रह्माण्डीय ऊर्जा वा भनौँ रहस्यले भरिएको प्राकृतिक शक्तिलाई नै त भगवान्, गड, अल्लाह आदिआदि नामले पुकारेका हुन् ।
आज हामीकहाँ अहङ्कारको दर्शन विकसित हुँदै छ, अर्थात् ‘म मात्र छु, अरु कोही पनि छैनन्’ भन्ने दर्शन । यही अहङ्कारको कमजोर जगमा ठडिएको अत्यन्त नाजुक दर्शनको नाम नै नास्तिक दर्शन हो । सामान्य अप्ठ्यारोमा पनि यो भताभुङ्ग भएर जान्छ । विपत्तिको सानो हावाले पनि यसको कन्तविजोग बनाइदिन्छ । तर, आस्तिकहरु ठूलाठूला आँधी र हुरीहरुमा पनि निर्भय र अविचलित बाँच्न सक्दछन्, किनकि उनीहरुले आँधी र हुरीलाई बनाउने पनि कोही छ भनेर सोचेका हुन्छन् ।
मानिसको समाज सबैलाई मूल्य दिएर मात्र सुन्दर बन्न सक्दछ । आपूmजस्तै सबैको अस्तित्वलाई स्वीकारेर मात्र हामीले मनुष्यता विकसित तुल्याउन सक्दछौँ । हामी आस्तिक हुनु भनेको सबैलाई सम्मान दिनु हो, सबैलाई स्वीकार्नु हो, सबैलाई प्रेम गर्नु हो भने नास्तिक हुनु भनेको कसैलाई नस्वीकार्नु हो । हामी नास्तिक हुनु भनेको आफ्नो अहम्लाई पोषण प्रदान गर्नुसिवाय केही होइन । यसले न हाम्रो हित हुन्छ, त अर्काको हित हुन्छ । सबैलाई अहित पु¥याउने यदि केही छ भने त्यो नास्तिकता हो ।
हामी पूर्वीय सभ्यतामा हुर्किएका मानिस । हाम्रो सभ्यता यही आस्तिकताको दर्शनले ओतप्रोत छ । हामी सबैलाई मूल्य दिन चाहन्छौँ । सबैको अस्तित्व हाम्रा लागि स्वीकार्य छ । सबैमा हामी ईश्वरीय अस्तित्वको दर्शन गर्न सक्दछौँ । हामी पशुपक्षीलाई पनि पूजा गर्दछौँ, बोटवनस्पतिलाई पनि पूजा गर्दछौँ । ढुङ्गामाटोबाट पनि देवत्व ग्रहण गर्दछौँ । कस्तो सकारात्मक दर्शन !
हाम्रो दर्शन नै सकारात्मक सोचको दर्शन हो । आस्तिकता भनेकै सकारात्मक सोच हो । हामी कहिल्यै पनि नकारात्मक भएनौँ । हाम्रा पूर्वजह्रु सधैँ प्रसन्न हुन्थे, सधैँ आशावादी हुन्थे । संस्कृत साहित्यको परम्परा संयोगान्त साहित्यको परम्परा हो । हाम्रा पूर्वजहरुले, आचार्य एवम् ऋषिमनिषीहरुले जीवनलाई तोडेर होइन, जोडेर हेर्न सिकाएका छन् । जीवनलाई कुरुप बनाएर मिल्क्याउन होइन, सिँगारेर सार्थक तुल्याउन सिकाएका छन् । उनीहरुले सिकाएको त्यही दर्शनको नाम हो, ‘आस्तिकताको दर्शन’ ।
नास्तिकता नकारात्मकताको दर्शन हो । यसले जताततै निराशा नै निराशाबाहेक केही पैmलाउँदैन । शान्त मानिसलाई पनि यसले अशान्त तुल्याउँदछ । स्वस्थ र निरोग मानिसलाई पनि अस्वस्थ र रूग्ण तुल्याउँदछ । जब तपाईँले कसैलाई पनि स्वीकार्नुहुँदैन, तपाईँलाई पनि कसैले स्वीकार्दैनन् । हामी चाहन्छौँ, सबैले हामीलाई स्वीकारी दिऊन् । मानिसहरुको सद्भाव, प्रेम, सहयोग प्राप्त नगरी हामी समाजमा बाँच्न पनि सक्दैनौँ । तपाईँ सबैले सहयोग गरुन्, प्रेम र सद्भाव व्यक्त गरुन, सबैले स्वीकारुन् भन्ने चाहिँ चाहनुहुन्छ, तर अरुलाई चाहिँ स्वीकार्नुहुँदैन भने तपाईँको जीवन अत्यन्त दुःखपूर्ण र एकाङ्की हुन पुग्दछ ।
हामी त अरुलाई पनि सहयोग गर्ने र अरुको पनि सहयोग चाहने प्राणी हौँ । आस्तिकताको दर्शनले हामीलाई पूर्णतः सामाजिक बनाउँदछ । हामी सबैका लागि सोच्ने र बाँच्ने बन्न थाल्दछौँ । हामी जति आस्तिक हुन्छौँ, त्यति नै हामीबाट बोटबिरूवा र पशुपक्षीले निस्सीम प्यार प्राप्त गर्न थाल्दछन् । हाम्रो खुसी र प्रेमको दायरा अझ फराकिलो भएर जान्छ । हामी सबैका लागि बाँच्न थालेपछि सबै हाम्रा लागि पनि बाँच्न थाल्दछन् ।
तर नास्तिकहरु एकलकाँटे भएर सकिन्छन्, जीवनलाई नै निरर्थक बनाउँदै । उनीहरुले कसैमाथि पनि विश्वास गर्दैनन् । आस्तिकहरुले त सबैलाई विश्वास गर्दछन् र ईश्वरलाई पनि विश्वास गर्दछन् । जीवनका भयानक दुःखहरुमा पनि ईश्वरलाई सम्झिएर सम्हालिन्छन्, तर नास्तिकहरु कसलाई सम्झिएर सम्हालिने ? आपूmबाहेक अरु कोही हुन्छन् भन्ने कहिल्यै नसोच्ने नास्तिकहरुको जीवन कहालीलाग्दो तरिकाले सकिन्छ ।
गीतामा भगवान्ले भन्नुभएको छ ः
वर्तमानानि चार्जुन ।
भविष्याणि च भूतानि
मां तु वेद न क श्चन ।।’
अर्थात् हे अर्जुन, पहिले बितेका, वर्तमानमा रहेका र भविष्यमा हुने सबैसबैलाई म जान्दछु, तर मलाई कसैले जान्दैनन् । किन जान्दैनन् त ? उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ ः
द्वन्द्वमोहेन भारत ।
सर्गे यान्ति परन्तप ।।’
अर्थात् अर्जुन, संसारमा इच्छा र द्वेषका कारणले उत्पन्न सुखदुःखरुपी मोहका कारणले सबै मानिस अज्ञानले मोहित भएका छन्, त्यसैले । ईश्वरको अस्तित्व अस्वीकार हाम्रो सबैभन्दा मूल कारण भनेको सांसारिक राग, मोह र अहंकार नै हो । रचनालाई चाहिँ स्वीकार्ने, तर रचनाकारलाई भने नस्वीकार्ने हाम्रो पद्धतिले हामीलाई अन्ततः हामीलाई निराशा नै निराशाको मरूमूमिमा लिएर जान्छ ।
यो संसार ईश्वरमय छ, सर्वत्र । रचना जहाँजहाँ हुन्छन्, रचयिता पनि त्यहाँत्यहाँ हुन्छन् । यदि सिर्जना छन् भने स्रष्टा पनि अवश्य छन् । हामीले सुन्दर पूmल फुलेका देखेका छौँ, चिर्बिराइरहेका चराचुरूङ्गीहरु देखेका छौँ र देखेका छौँ, झर्भmर झर्भmराइरहेका छाँगा–झरनाहरु । यी सबै सुन्दर रचना र सिर्जना यदि छन् भने किन छैनन् यिनका रचयिता र स्रष्टा ? कसरी अस्तित्वहीन हुन सक्दछन् यी सुन्दर नदीनाला, हिमाल–पहाड र तरेली परेका फाँटका रचनाकार ? ती रचनाकार सर्वत्र छन्, दायाँबायाँ यत्रतत्र ।
भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ ः
नात्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।
मयि सर्वमिदं प्रोतं
सूत्रे मणिगणा इव ।।’
अर्थात् हे धनञ्जय, मदेखि भिन्न यो संसारमा दोस्रो कुनै कारण छैन । यो सम्पूर्ण जगत् मालामा उनिएका मणिहरुजस्तै ममा उनिएका छन् । फ्रान्सिस बेकनले भनेका छन् ः ‘ईश्वरले आस्तिकता उत्पन्न गर्नका लागि आश्चर्यजनक घटनाहरु देखाएका छैनन्, उनका सामान्य कृतिह्रुले नै उनको महत्त्व दर्साइरहेका छन् ।’ ईश्वर अनौठा छन् किनकि उनको रूप अनौठो छ । उनको कुनै निश्चित रूप छैन किनकि उनी जुनसुकै रूपमा पनि बदलिन सक्दछन् । यसैले, ईश्वरलाई अनौठा भनिएको हो । उनी एकै पटक अनेकमा व्याप्त छन् । उनको दर्शन गर्न कुनै कठिनाइ र दस हन्डर खानुपर्दैन । प्रकृृतिका सानाठूला सबैसबै सिर्जना नै उनको अस्तित्व बताउनका लागि पर्याप्त छन् ।
संशय, शङ्का र अविश्वासले हामीभित्र नित्य तनाव र बेचैनीबाहेक केही जन्माउँदैनन् । यदि चाहन्छौँ हामी अनावश्यक संशय, द्विविधा र तनावबाट, त्यसका लागि आस्तिक हुनुको विकल्प छैन, विश्वास र श्रद्धाले युक्त हुनुको विकल्प । यदि हामी निराशा र नकारात्मक चिन्तनबाट मुक्त हुनुछ भने पनि समर्पण र स्वीकृतिले भरिनुको विकल्प छैन । गीताले हामीलाई यही भक्ति, स्वीकृति र समर्पणको दर्शन सिकाउँदछ । हामी सर्वस्वीकार्य बन्नुछ, तर सबैलाई स्वीकारेर मात्र ।
मनुष्यलाई त झन् आस्तिकता सधैँ चाहिन्छ वा भनौ मान्छे भनेकै आस्तिकताले बनेको प्राणी हो । हामीले बाबुलाई मानेका छौँ, आमालाई मानेका छौँ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीको नाता सम्बन्धलाई मानेका छौँ । समाजमा मिलेर बस्नुपर्दछ भन्ने दर्शनलाई मानेका छौँ । देश, भेष, भाषा, संस्कृति र चालचलनलाई मानेका छौँ । हाम्रा यी सबै मान्यताह्रुले नै हाम्रो आस्तिकता बोलिरहका छन् । जतिजति हामीले यिनको अस्तित्व अस्वीकार गर्दछौँ र कसैको पनि आवश्यकता महसुस गर्दैनौँ, त्यतित्यति हामी नास्तिक हुँदै जान्छौँ र जीवनलाई निरस, एकलकाँटे बनाएर बिताउँदछौँ ।
नास्तिकता हामीलाई बनाउने भन्दा पनि भत्काउने दर्शन हो । यसको पछि लाग्ने हो भने त हामी निराशाको भुमरीमा सधैँ जकडिन बाध्य बन्दछौँ । आस्तिकताले हामीलाई सबैका बनाउँछ भने नास्तिकताका पछि लाग्दा हामी न यताका हुन्छौँ, न उताका हुन्छौँ । हामी सबै आशावादी बनेर जीवनमार्गमा अघि बढ्नुछ । त्यसका लागि नास्तिक भएर हुँदैन । हामी सुखमय जीवन चाहन्छौँ । सबैको सद्भाव र स्नेह पाएर नै हामी सुखी हुन सक्दछौँ । त्यसैले, आउनुस्, ‘छैन र हुँदैन’ भन्ने नकारात्मकताले भरिएको नास्तिक दर्शनबाट मुक्त हुँदै ‘छ र हुन्छ’ भन्ने सकारात्मकताले भरिएको आस्तिकभावले युक्त बनौँ । सबैबाट त्यही अमृतमय प्रेमधारा प्राप्त गरौँ । भुसुनादेखि भगवान्सम्म सबैको अस्तित्व स्वीकार गरौँ । सबैप्रति श्रद्धा र निष्ठा प्रकट गर्दै सबैको प्रेम आशीर्वाद र अनुकम्पा पाएर रोग, भोक र शोकुमुक्त भई जीवनलाई धन्य बनाऔँ ।